“दौड प्रतियोगितालाई स्थानीय र स्थानीय निकायले सकारात्मक रूपले हेरेको छ” -बिपुल मगर - Naya Online
आइतवार, मंसिर ७, २०७७ (November 22nd, 2020 at 8:54am ) अन्तर्वार्ता
गत मंसिर ५ गते मोरङको केराबारी गाऊँपालिका वडा नं. १ मा इतिहाँसमै प्रथमपल्ट “पहिलो पाटीगाऊँ दौड प्रतियोगिता” बडो हर्सोल्लास र तामझामका सम्पन्न भएको छ । सो प्रतियोगिताको चौतर्फी चर्चा भयो । सिङ्गो वडामा उत्साह छायो । र, सो ऐतिहासिक प्रतियोगिताको आयोजकहरू थिए बिपुल मगर, किरण लिम्बु र डेविड लिम्बु । आयोजक मध्येका बिपुल मगर प्रतियोगिताभर व्यस्त रहे । प्राविधिकदेखि व्यवस्थापनमा उत्तिकै नै लागि परे । सो प्रतियोगिता सफलताका साथ सम्पन्न गरे पश्चात हामीले आयोजकलाई सम्पर्क गर्न खोज्यौं । र जोडिए आयोजकमध्येका उनै बिपुल मगर । प्रस्तुत छ उनैसँग प्रतियोगिताको बारेमा नयाँ अनलाइनले गरेको कुराकानीको सार अंश ।
पाटीगाऊँ दौड किन र के का लागि ?
पहिलो कुरा त दौड भन्ने बित्तिक्कै कुद्ने भन्ने बुझिन्छ । दौडनाले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्दछ । दौड एउटा व्यायाम हो, जसले गर्दा तनाव कम गराउन सहयोग गर्न सक्छ, मुटुको स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्छ र डिप्रेसनको लक्षणहरूलाई कम गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । र पाटीगाऊँ दौड पनि यसैको उपज हो । यहाँका भाईबहिनीहरूलाई दौडको माध्यमबाट शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपले स्वास्थ्य राख्नको लागि गरिएको सानो प्रयास हो ।
प्रतियोगिता कस्तो भयो ?
अपेक्षा गरेभन्दा धेरै राम्रो ।
व्यवस्थापन कठिन भएन र ?
कठिन भन्दा नि एउटा चुनौती थियो, किनभने आ नै ठाउँमा यस्तो दौड कार्यक्रम सफल गर्न सके भोलिको दिनहरूमा खेलकुदसँगै एथ्लेटिक्स कार्यक्रम पनि आयोजना गरी त्यहाँका भाईबहिनीहरूलाई सकरात्मक सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित थियौँ । साथै, आयोजक साथीहरू, त्यहाँका बुद्धिजिवी अग्रज व्यक्तिहरू र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूसँंगै यस कार्यक्रम सफल पारिदिनको लागि महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेसहयोगीहरूको साथ र सहयोगले गर्दा सहज र सफल भयो ।
यो प्रतियोगितालाई त्यहाँका स्थानीय र स्थानीय निकायले कसरी हेरेका छन् ?
फुटबल, भलिबलजस्ता प्रतियोगिताहरू त भईरहन्थे, तर दौड….. ? धेरै नै कौतुहलता र चासोको विषयको रूपमा लिईएको पाएँ । सम्भवतः इतिहासमा नै त्यस ठाउँको लागि पहिलो दौड प्रतियोगिता आयोजना भई सम्पन्न भएको हुँदा त्यहाँका स्थानीय र स्थानीय निकायले सकरात्मक रूपले हेरी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै प्रतियोगिता आयोजना हुनुपर्छ÷गर्नुपर्छ भन्ने संकल्प व्यक्त गर्नु भएको छ । यसर्थ प्रतियोगितालाई चासो र सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेको महसुुस गरेका छौँ ।
सहभागीहरू के भन्छन् ?
अनौठो प्रतियोगिता जुन आजसम्म हुन सकेको थिएन, तपाईहरूले आयोजना गरिदिनु भएर हामीभित्र रहेको आँट, साहस अनि क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने मौका मिलेको छ । फुटबल र भलिबलजस्ता प्रतियोगिताहरूमा मात्र हामी सिमित थियौं, आज अर्कै किसिमको अनुभव मिलेको छ, खुशी छौ, सन्तुष्टि छौ । उनीहरू यसो भन्दै हामीसँग अहिले पनि मोबाइल, फेसबुकमार्फत खुशी साटासाट गरिरहेका छन् ।
यो दौड प्रतियोगिताको सन्देश के होला ?
दौड एउटा व्यायाम हो, जुन कुरा मैले माथि पनि उल्लेख गरिसकेको छु, दौडिनु सजिलो छ, रमाईलो छ र धेरै सामाजिक पनि छ । यसले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा पनि आपूmलाई दरिलो बनाउन मद्दत गर्दछ । साथै यो दौड प्रतियोगिता, एउटा प्रतियोगिता मात्र नभई स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, आत्मियता, हार्दिकता, सिर्जनशिलता र पहिचान पनि हो त्यसैले हामीजस्तो यूवाहरू झोले जिन्दगी बिताएर, डुलेर/घुमेर मात्रै हैन आफ्नो गाऊँ–ठाउँ, समाज र राष्ट्रको लागि आफुले सक्ने रचनात्मक/सिर्जनात्मक कामहरू गरेर अघि बढौं भन्ने हो ।
यस “पहिलो पाटीगाऊँ दौड प्रतियोगिता, मिनी म्याराथन–२०७७” को आयोजक भएको हैसियतले यस प्रतियोगितालाई सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण प्रचार–प्रसार समिति, अतिथिगणहरू, बुद्धिजिवी अग्रजहरू, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू, मिडिया पार्टनरहरू, सहयोगी संस्था साथै व्यक्तिहरू, खेलाडी भाईबहिनीहरू र आगामी दिनहरूको लागि यस्तै खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि हौसला दिनुहुने सम्पूर्ण खेलप्रेमी शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद ।